Codadka Nabadda (V4P) - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Hadda, markaan tago tuuladayda, waxaan arkaa dad ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada oo isu yimid, kaftamaya oo isla hadlaya. Maahan sidii hore markii qof walba uu ku ekaanayay noociisa, tanina waxay ku mahadsan tahay waxbarashada barnaamijyadaada. ” - Oumar Mahamat, Ndjamena, Chad
Codadka Nabadda (V4P) waa iskaashi shan sano ah oo heer gobol ah oo lala yeesho USAID oo la bilaabay 2016 oo loogu talagalay yareynta u nuglaanta xagjirnimada rabshadaha leh ee Galbeedka Afrika iyo kor u qaadista dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha iyo dowlad wanaagga iyadoo la kordhinayo codadka dhexdhexaadka ah ee nabadda iyo dulqaadka Burkina Faso, Chad, Niger, Cameroon iyo Mali.
Tan iyo horraantii 2000-meeyadii, xagjirnimada rabshaduhu waxay caan ku noqdeen qaybo ka mid ah Sahel Afrika iyo Galbeedka Afrika, halkaas oo tobanaan kun oo dad ah ay ku dhinteen xagjiriinta rabshadaha wata iyo ololayaasha ka dhanka ah dawladda ee ay wadaan. Colaadaha gobolka iyo qalalaasaha bani'aadamnimo ee ka dhashay waxay ku barakaceen malaayiin gudaha iyo daafaha xuduudaha dalka.
V4P wuxuu balaariyaa saameynta EAI ee kahortaga xagjirnimada rabshadaha (CVE) iyadoo loo marayo isku darka waxqabadka bulshada iyo barnaamijyada warbaahinta ee lagu dhisay EAI sideedii sano ee guuleysatay ee CVE ee wax soo saarka warbaahinta iyo baahinta iyada oo ah lamaane wadashaqeyn ku leh USAID Peace iyada oo loo marayo mashaariicda horumarinta (PDev I & PDev II) ).
"Shaqo la’aanta dhalinyarada waa midda ugu weyn ee ku riixeysa dhalinyarada xagjirnimada. Waa inaan sare u qaadno wadahadalka si aan u xallino khilaafaadka, aan u kordhinno aqbalaadda bulshada, iyo inaan shaqooyin u abuuro dhallinyarada."
Habka cusub ee bulshada loo wado ee 'VVE' ee 'VVE' ee loo yaqaan 'VVE' ee loo yaqaan 'CVE' wuxuu mideeyaa istiraatiijiyado bartilmaameed ah oo waddan kasta ah oo ku saabsan tiirarka xagjirka ah ee rabshadaha wata. Qorshaha Mashruuca Korjoogteynta & Qiimeynta (AMEP) wuxuu diiradda saarayaa tilmaamayaasha natiijada ee lagu soo saaray iskaashi lala yeesho USAID / Galbeedka Afrika, ergooyinka dalka ee USAID, daneeyayaasha muhiimka ah, iyo bulshada ay V4P ka howlgasho. Qaabkan cusub ee loo wajahayo CVE wuxuu awood u siinayaa V4P in ay soo gasho wax ka qabashada nuglaanta bulshada ee xagjirnimada iyada oo la xoojinayo adkeysiga bulshada iyada oo loo marayo iskaashi dhinacyo badan leh.
V4P waxay kudareysaa aqoonta maxaliga ah ee EAI ee waxa ushaqeeya iyo waxa aan kajirin Sahel waxayna isticmaashaa barnaamijka saxiixa bulshada ee kudhisan EAI, oo ay kamid tahay barashada iyo laqabsiga oo ay kamid yihiin kooxaha V4P oo si joogto ah u qiimeeya barnaamijyada, iskaashiga, iyo sheekooyinka ugu waxtarka badan dadaallada CVE, iyo qaadashada habab cusub oo ku saleysan barashadaas. Ujeeddadan, naqshadeynta barnaamijka V4P wuxuu leeyahay dabacsanaan lagu dhisay si wax looga beddelo bartilmaameedyada juqraafi, farriinta iyo baaxadda la qabsiga iyo ka jawaabidda beddelaadda sheekooyinka rabshadaha wata iyo xaaladaha amniga dareeraha.
Gobolka oo dhan, V4P waxay isu keentaa saameeyayaasha maxalliga ah iyo hoggaamiyeyaasha si ay u bixiyaan jawaab-celin ku saabsan barnaamijyada raadiyaha si ay u habeeyaan soo-saarka agabyada asluubta leh ee ka hadlaya arrimaha CVE. Kooxaha La-Talinta Waxyaabaha Ay Ka Wada-hadlayaan ayaa waxay ka wada-hadlaan oo ay u bixiyaan khibrad farsamo oo ku saabsan barnaamijyada raadiyaha si loo hubiyo in waxa ku jira barnaamijyada raadiyaha ay yihiin kuwo farsamo ahaan sax ah oo dhaqan ahaan ku habboon, iyo sidoo kale madaddaalo iyo ku-mashquul-galid dhagaysi kasta oo maxalli ah. Dhageysiga Doodaha Wadahadalka iyo Kooxaha Waxqabadka (LDAGs) isuduwayaasha waxaa loo tababaray inay abuuraan wada hadal ku saabsan mowduucyada CVE, maamul wanaag, iyo nabad ka dhex dhaca asxaabtooda.
Baadhitaanka ballaaran ee qaab dhismeedka ah iyo shaqaalaha maxalliga ah ee waddan kasta wuxuu hubiyaa in V4P ay si firfircoon ula shaqeyso kooxaha nugul gaar ahaan kuwa la takooro oo ay ku jiraan dhallinyarada, haweenka, bulshooyinka saboolka ah, iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay maadaama kooxahan ay inta badan bartilmaameedsadaan jilayaasha xagjirka ah ee rabshadaha wada EAI waxay kaloo u dooddaa una abuurtaa fursado lagu mideeyo codadka kooxahan fagaarayaasha rasmiga ah ee siyaasadeed iyo dhaqaale si wax looga qabto tabashooyinka ay qabaan.
Si taas loo gaaro, bishii Sebtember 2018, 29 ururrada dhallinyarada ee Chad ayaa qabtay shir jaraa'id iyagoo dalbanaya in lagu daro geeddi-socodka siyaasadeed si loo abuuro fursad dhaqaale. EAI waxay qabatay kulan magaalada ah oo ay la yeelatay kooxahan dhalinyarada ah iyo badhasaabada 10 ismaamul, taas oo fursad qaasa u siisay siyaasad dejiyeyaashu inay wax ka qabtaan arrimaha dhalinyarada isla markaana ay dhexgalaan geedi socodka qorshaynta. Fududeynta EAI ee nuucaan oo kale ah waxay hoos u dhigtay suurtagalnimada in sheekooyinka VE ay soo jiidan doonaan dhalinyarada. Tani waa mid xasaasi ah marka loo eego qaraxii dadka ee N'Djamena, Chad caasimada dalka waxaa lagu qiyaasaa 70% dadka 2 milyan ee ku nool halkaas dhalinyaro.
Tusaale ahaan, kooxaha sida Budumas ee harada Lake Chad, oo badanaa lagu eedeeyo inay la shaqeeyeen Boko Haram, waxaa lagu casuumay inay soo bandhigaan dareenkooda iyo cabashooyinkooda kulamada iyo kulamada. Runtii, markii ugu horeysay, iyo kooxdeena maxalliga ah, xubnaha Budumas waxay awood u yeesheen inay ku hawl galaan siyaasad-dejiyeyaasha arrimaha ka-soocaya nidaamkooda waxayna kicinayaan wadahadal socda wadahadal furan. Dhanka kale, V4P waxay sii wadaysaa inay sii xoojiso xirfadaha farsamo ee soosaarka raadiyaha maxalliga ah qaab qiimeynta awoodda raadiyaha, khariidaynta signalada iyo taageerada maaddada.
Xeryaha Farsamada Dhallinyarda iyo Shirarka Fiidiyowga: Xeryaha teknoolojiyada ayaa ah kuwo cusub oo lagu daray Bortofooraha EA ee Sahel iyo, oo la caddeeyay inay ka mid yihiin howlaha ugu firfircoon uguna guusha badan V4P mashruuc. Kulamada waxaa ka mid ahaa farsamooyinka u doodista, gaarista isbedelka bulshada iyada oo loo marayo qaabab aan rabshad lahayn, talooyin warbaahinta iyo tabaha bulshada, iyo soosaarida filimka iyo tababarka tafatirka. Tartamada fiidiyowga dhalinyarada ayaa la bilaabay iyada oo xerooyinka la siinayo ka qaybgalayaasha fursad ay ku dhigaan xirfadahooda cusub ee ay u adeegsadaan abuuritaanka fiidiyowyo ku saabsan wax ay ku beddelaan beeshooda.
Xeryaha teknolojiyada dhalinyarada ayaa ka dhacay Cameroon, Niger, Burkina Faso iyo Mali, iyagoo u ogolaanaya hogaamiyaasha bulshada in loo tababaro inay adeegsadaan warbaahinta bulshada si ay uga caawiyaan ka hortaga sheekooyinka xagjirnimada ee rabshadaha wata guud ahaan gobolka iyadoo la dhiirrigelinayo dowlad loo dhan yahay.
“Doorka haweenka ee dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada rabshaduhu waa muhiim. Markaan haweenku mideyno, waxaan nahay awood aan loo dulqaadan karin. ”- Walida Ousmane, 23 jir, Kuxigeenka Madaxa Hogaanka gabdhaha da 'yarta ee Niger
Haweenka Nabadda bixiya: V4P wuxuu aasaasayaa haweenka iyo gabdhaha inay noqdaan hogaamiyaasha CVE guud ahaan mashruuca warbaahinta iyo howlaha kaqeybgalka bulshada. Tartanka Haweenka Sannadlaha ah ee V4P ee Tartanka Nabadda ee waddan kasta wuxuu aqoonsadaa dhiirrigelinta haweenka hoggaamiyeyaasha ah iyo tabarucyadooda ku aaddan wadajirka bulshada. Barnaamijyada majaladda raadiyaha hoggaaminta haweenka, barnaamijyada saabuunta raadiyaha ee gobolka, iyo taxanaha fiidiyowga hoggaaminta haweenka waxaa ku jira haween u babac dhigaya fikradaha ku saleysan fikradaha musuqmaasuqa iyo xallinta khilaafaadka iyo ka hortagga sheekooyinka VE.
Wicitaan Wadajir ah: Bishii Juun 2017, weerarro dilaa ah oo ka dhacay xadka Niger-Burkina Faso ayaa waxyeelay dhammaan bulshada. Markii laga jawaabayo weerarada, V4P Waxay la shaqeysay idaacadaha maxalliga ah si loo kobciyo wada-hadalka iyadoo la siinayo meel amaan ah oo bulshada lagu xiriiriyo saraakiishooda maxalliga ah. Is dhexgalka Idaacadaha raadiyaha, oo ay kujiraan isweydaarsiyo ay la galaan hoggaamiyeyaasha maxalliga ah oo ay ku xigto qaybaha wicitaanka, ayaa isla markiiba waxtar u yeeshay isku xirka xubnaha kala duwan ee bulshada. "Wadahadalka noocan oo kale ah ee lala yeesho dadka iyo gaar ahaan dhallintayagu waa furaha la-dagaallanka xag-jirnimada," ayay tiri mas'uuliyiinta maxalliga ah ee ka soo jeeda gobolka Tera.
Cusbooneysiinta V4P 2019-2020:
Farshaxanka sawir qaadista leh COVID-19 gudaha Sahel
Bixinta Beddelka loogu talagalay dhalinyarada si ay ugu biiraan kooxaha rabshadaha xagjirka ah ee Cameroon
Abuuritaanka Taageerada Bulshada ee Maamulka Maxalliga ah ee Maali
Kaa caawinta jebinta wareegga rabshadaha ee Sahel
Codadka Raadinta Daraasad ee Dhageysiga Nabadda
Ka caawi EAI inay ku fidiso baalasha nabada guud ahaan Sahel isla markaana u suurta gasho dhalinyarada iyo haweenka inay noqdaan hogaamiyaasha dhaqdhaqaaqaas.